Nuuralhudaa – Telegram
“Manneen keessan qabroota hin godhinaa. Mana Suuraan al-Baqraa keessatti qara’amurraa Sheyxaanni ni baqata.”
[Muslim : 780]
Mana Qur’aanni keessatti qara’amu Barakaatu jira. Salaata Sunnaas manatti Salaatuu heddummeessaa.
*لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقابِرَ، إنَّ الشَّيْطانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الذي تُقْرَأُ فيه سُورَةُ البَقَرَةِ.*
4.5K viewsNuuralhudaa, 00:22
👍 87👎 4💬 3
“Dhiirri Mu’minaa tokko(haadha mana isaa Mu’minaa) hin balfin. Yoo haala tokko irraa jibbe, kan biroo irraa jaalata.”
[Muslim : 1469]
Warra keessan jabeessaa.
*لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إنْ كَرِهَ منها خُلُقًا رَضِيَ منها آخَرَ، أَوْ قالَ: غَيْرَهُ.*
4.0K viewsNuuralhudaa, 12:05
👍 82👎 2💬 1
Rabbitti amanuu fi Isaaf of gadi qabuun uumama qulqulluu (fixrah) namni hunduu irratti uumameedha.
“Karaa haqaatti dabuun fuula kee amantiif sirreessi. Fixrah Rabbii kan Inni namoota hundaa irratti uume [qabadhaa]. Uumama Rabbii jijjiruun hin jiru. Santu amanti qajeeladha. Garuu irra hedduun namootaa hin beekan.” Suuratu Ruum 30:30
Sheykul Islaam ibn Taymiyah ni jedha: “ Rabbitti amanuun fixrah gonkumaa nama keessaa hin dhabamneedha. Bu’uura beekumsa herreegaa caalaa nafsee keessatti hidda kan qabateedha. Akkuma ,Tokko walakkaa lamaati jennu.”
4.3K viewsMohamedamin Hussen, 15:53
👍 69👎 9💬
Amantiiwwan fuula dachee kanarra jiran keessaa, amantiin ajajoota Rabbii hojirra oolchuudhaan gammachuu addunyaatii fi Aakhiraa nama gonfachiisu Islaamummaa qofa.
Islaamummaan dawaa keessooti. Tasgabbii qalbiiti.
(ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ)
"Warroota Rabbitti amanan, qalbiin isaanii zikrii (faaruu) isaatiin tasgabboofti. Hubadhaa! yaadannoo Rabbiitiin qalbiin tasgabbii argatti." Suuraa Arra’ad Aayata:28
Faallaa kanaa immoo' addunyaa kana keessa ummata tasgabbii dhabuun dhukkuba dhiphachuutiin miidhamantu jiru. Rabbiin sababa dhiphachuu akkanatti ibsa
(وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةًۭ ضَنكًۭا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ)
"Namni gorsa kiyya (fudhachuu didee) irraa garagale (addunyaa fi qabrii keessattis) jiruu dhiphootu isaaf jira. Guyyaa qiyaamaas nama ija hin qabne isa goonee (dirree walgeettitti) isa oofna." Suuraa Xaahaa Aayata :12
Zikriiwwan Rabbiin ittiin yaadannu keessaa Zikriin halkan/galgala jedhamu isa armaan gadiiti!
أَمْسَيْنا وَأَمْسَى الْمُلْكُ للهِ رَبِّ الْعَالَمَيْنِ، اللَّهُمَّ إِنَّي أسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَه اللَّيْلَةِ فَتْحَهَا ونَصْرَهَا، ونُوْرَهَا وبَرَكَتهَا، وَهُدَاهَا،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فيهِا وَشَرَّ مَا بَعْدَهَا
"Nuti galgaleessifanne. Mootummaanis kan Rabbii ta’ee galgalaaye. Rabbii Aalamaa kan tahe, Yaa Rabbi An si kadha. toltuu halkan kana keessa jiruu, Banaa isiidha, Tumsa isiidha, ifaa isiidhaa, Barakaa isiidhaa, Qajeelluma isiidhaa si kadha. Sittiin maganfadha hamtuu halkan tana keessa jiruufi hamtuu isii booda jiru irraa."
4.5K viewsMohamedamin Hussen, 19:01
👍 113👎 4💬 3
Nabii iisaa (aleyh-salaam) ilaalchise Qur’aana keessatti Rabbiin akkana jedha:
“Yeroo Rabbiin “Yaa Iisaa ilma Mariyam! Sila situ namootaan ‘Anaa fi haadha tiyya Rabbii gaditti gabbaramaa (gooftaa waaqefatamu) lama taasifadhaa’ jedhee?” jedhu [yaadadhu]. Innis ni jedha, “Ati Qulqulloofte! Ani wanta haqa naaf hin taane jechuun naaf hin ta’u. Yoo ani san kan jedhu ta’e, dhugumatti Ati beektee jirta. Wanta lubbuu kiyya keessa jiru ni beekta, ani waan nafsii Kee keessa jiru hin beeku. Dhugumatti Ati sirritti beekaa waan fagoo fi hin mul’anneeti. Waan Ati itti na ajajje, “Rabbii Gooftaa kiyyaa fi Gooftaa keessan ta’e gabbaraa” jechuu malee waan biraa isaaniin hin jenne. Hangan isaan keessa turetti isaan irratti ragaan ture. Erga ol na fuutee booda, Ati isaan irratti Tiiksaa turte. Ati waan hundaa irratti ragaadha. Yoo isaan adabde (azzabde), gabrootuma Keeti. Yoo isaaniif araaramtes, Ati Simatu Injifataa Ogeessa.” Suuratu Al-Maa’ida 5:116-118
4.1K viewsMohamedamin Hussen, 11:22
👍 94👎 7💬 5
Kabajamtoota Hordoftoota NUURALHUDAA sagantaa Soora Qalbii Torban kanaa sababa rakkoo humnaa oliitiif isinii dhiheessuu dhabuu keenyaaf dhiifama Isin gaafanna. Inshaa ALLAAH yoo Rabbiin guddaan jedhe torbaan dhufu Isiniif qabannee dhihaanna!
3.5K viewsNuuralhudaa, edited 18:37
👍 110👎 9💬 6
Yaa Obboleessa/Obbolii Islaamaa! yeroo keetti fayyadamaa jirta moo qisaasutti jirta ?
Rabbiin ilma namaa hundaaf yeroo murteessee qoodeef; yeroon nuuf kenname kun gabaabduu yoo taatu, yoom akka dhumatu garuu hin beeknu. Kun hikmaa Rabbii keennaati. Gaafa qoodni keenna xumurame jiruu duniyaa tana hunda lakkifnee dalagaa keenna qofa waliin keessaa godaanna.
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (34)
Rabbiin (Subhaanahu Wata'aalaa) akkana jedha:- "Ilma namaa hundaaf yerootu qabameef, hoggaa yeroon isaanii (xumurarra) geeyse, sa’aa takkallee hin durfaman, boodallee hin aanan"
Suuratul A'raaf Aayata 34
Akkuma ayaata kana irraa hubannutti, yeroon ilma namaatii Rabbirraa kenname murtaahaadha. Kanaafuu yeroo nuuf kenname keessatti toltuu dalagachuun Aakhiraaf haa qophoofnuu!
4.1K viewsMohamedamin Hussen, edited 04:52
👍 124👎 8💬 3
ZIKRII GANAMAA: Qalbiin akka Tasgabbooftuuf Zikrii heddumeeysaa!
Zikriiwwan Rabbiin ittiin yaadannu keessaa Zikriin ganama jedhamu isa armaan gadiiti!
أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ
"Nuti bariisifanne. Mootummaanis kan Rabbii ta’ee bule. Faaruun kan Rabbiiti. Dhugaan gabbaramaan Rabbiin malee hin jiru. Inni tokkicha hiriyyaa/shariika hin qabneedha. Mootummaan kan isaati. Faaruunis kan isaati. Inni waan hunda irratti danda’aadha. Yaa Rabbi ani toltuu guyyaa har’aa keessa jiruufi toltuu booda isaa jiru sin kadha. Sharrii guyyaa har'aa keessa jiruufi sharrii booda isaatii jiruu irraa sittin maganfadha. Yaa Rabbi hifannoo (nuffaa) fi dulluma hamaa irraa sittin maganfadha. Yaa Rabbi adabbii ibidda keessaatiifi adabbii qabrii keessaa irraayis sittin maganfadha."
3.5K viewsMohamedamin Hussen, 04:01
👍 92👎 7💬
“Namni galmee isaa keessaa Istighfaarri(gama Rabbii deebi’uun) hedduun arkame waa milkaawee(Jannataatu isaaf jira).”
[Sahiih ibn-Maajah : 3093]
- ‘AstaghfiruLlaah’ jechuu haa baay’isnu.
*طُوبى لِمن وَجَد في صَحيفتِه استِغفارًا كثيرًا.*
الراوي : عبدالله بن بسر
3.2K viewsNuuralhudaa, edited 10:28
👍 86👎 3💬 2
“Nagayni(As-Salaam) maqaa maqoota Rabbii ol’aanee irraahi, kan lafa keessa kaaye. Jidduu keessanitti(nagaya) raabsaa.”
[Sahiihul-Jaami’ : 1639]
- Nagaya wal gaafachuun, Salaamtaa waliin jechuun mindaa gaarii qabdi.
*السَّلامُ اسمٌ من أسماءِ اللهِ تعالَى وضعه في الأرضِ ، فأفشُوه بينكم.*
الراوي : عبدالله بن مسعود.
3.3K viewsNuuralhudaa, edited 15:53
👍 94👎 8💬
“Wanni fokkottuun heddummaattee dubbatamuun, wanni fokkottuun heddummaattee dalagamuun, firri wal muruun, nama amanamaan ‘gantuu’ jechuun, gantuun ammoo amanamuun mallattoo Qiyaamaati.”
[Sahiihul-Jaami’ : 5894]
- Zamanni baduun Qiyaamaan dhihaachuu garsiisa.
*من أشراط الساعة الفُحش، والتَّفحُش، وقطيعة الرحم، وتخوين الأمين، وائتمان الخائن.*
3.4K viewsNuuralhudaa, 02:47
👍 79👎 6💬
“Isinirraa namni akkaan na biratti jaalatamu, kan guyyaa Qiyaamaa qubsumti isaa akkaan natti dhihaattu nama isinirraa amala gaarii qabu.”
[Tirmizii : 2018]
- Muslimni haala bareedaa qabu Jannata ollaa Rasuulaa qubata.
*إنَّ مِن أحبِّكم إليَّ وأقربِكُم منِّي مجلسًا يومَ القيامةِ أحاسنَكُم أخلاقًا.*
الراوي : جابر بن عبدالله.
3.4K viewsNuuralhudaa, 13:00
👍 81👎 5💬
Ulaagaa du’aa’ii guutnee Ikhlaasaa fi akkataa Rasuulli kadhatanitti Rabbi yoo Kadhanne nuuf awwaata!
Rabbiin akkaata isa kadhachuu qabnu yemmuu nuuf himu:-
“Rabbi qofaaf amantii qulqulleeysaati isa kadhadhaa..”Ghaafir: 14
Rasuulli ﷺ akkana jedhan “Rabbi kadhadhaa abdii nuuf qeebalama jedhuun (yaqiinaan)” Sunana tirmiizii
Rabbiin warri dhugaan isa kadhatu akkaataa itti isa kadhatan hoggaa himuu akkana jedhe, “Isaan kajeeloo fii sodaatoo haala tahaniin nu kadhatan.” Al-Anbiyaa: 90.
Rasuulli ﷺ akki jedhan “Tokkoon keeysan hoggaa Rabbi kadhatu haa jala muree kadhatuu, yaa Rabbi yoo feete naaf kenni hin jedhin” Bukhaarii fii Muslimtu gabaase.
3.3K viewsMohamedamin Hussen, 16:37
👍 78👎 7💬
Irra caalaan Zikrii halkaan Jummaa fi guyyaa Jummataa Salawaata. Nabiin ﷺ akkana jedhan:
"Nama Salawaata takka narratti buuse Rabbiin Rahmata 10 isarratti buusa, cubbuu 10 irra haqa, sadarkaa 10 isaaf ol fuudhaHoo
Sallallaahu Aleeyhi Wassalam.
2.7K viewsNuuralhudaa, 20:54
👍 87👎 7💬 4
Fakkeenya nama Rabbiin maletti waan biroo gabbaruu ilaalchisee Rabbiin haala ajaa'ibaatin Qur'aanaa keessatti nuuf ibse.
ﺿَﺮَﺏَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣَﺜَﻠًﺎ ﺭَﺟُﻠًﺎ ﻓِﻴﻪِ ﺷُﺮَﻛَﺎﺀُ ﻣُﺘَﺸَﺎﻛِﺴُﻮﻥَ ﻭَﺭَﺟُﻠًﺎ ﺳَﻠَﻤًﺎ ﻟِﺮَﺟُﻞٍ ﻫَﻞْ ﻳَﺴْﺘَﻮِﻳَﺎﻥِ ﻣَﺜَﻠًﺎ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺑَﻞْ ﺃَﻛْﺜَﺮُﻫُﻢْ ﻻ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ‏
"Rabbiin fakkeenya godhe, Gabricha Mootonni isaa walfalleessanii fi Gabricha guutumatti Mootii tokkoof bulu fakkeenyi isaanii tokkoo? Faarun cufti Rabbiif haa tahu, Garuu irra hedduun namaa hin beekanu" (Suuraa az-Zumar; 29)
2.5K viewsMohamedamin Hussen, 05:44
👍 74👎 8💬
"Isinirraa namni obboleessa isaa fayyaduu dandahu haa fayyadu."
[Muslim : 2199]
- Beekkumsaafi ogummaa qabdu obboleeyyan kee barsiisi. Obbolummaan Muslimaa jabduudha.
*مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُم أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ.*
2.4K viewsNuuralhudaa, 15:32
👍 55👎 5💬
"Warra dide malee ummanni kiyya hundi Jannata seena. Namni na hordofe Jannata seena. Namni na morme ammoo dhugatti dide(hoongawe)."
[Bukhaarii : 7280]
- Qur'aanaafi Sunnaa qabannaan Muhammad hordofne jechuudha. Muhammad hordofnaan Rabbiin nurraa jaalata. Karaan Jannata nama badhaasu kana qofa.
*كُلُّ أُمَّتي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَن أَبَى، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَن يَأْبَى؟ قالَ: مَن أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَن عَصَانِي فقَدْ أَبَى.*
2.2K viewsNuuralhudaa, 17:12
👍 80👎 6💬
"Nama Muslimaa kamillee kan ilmaan bakka hin gahin 3 irraa du'an (Shafii tahan), sababa Rahmata isaaniif godhuun Rabbiin Jannata naqu malee hin taane."
[Bukhaarii : 1381]
- Namni daa'imni irraa duunaan obsa bareedaa obse Jannata seena.
*ما مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ، يَمُوتُ له ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ، إلَّا أدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ بفَضْلِ رَحْمَتِهِ إيَّاهُمْ.*
1.9K viewsNuuralhudaa, 02:58
"Koola xiqqeenyaa isaaniif gadi qabi..."
Haadhaafi abbaa keenyatti iftuuluu osoo hintaane, isaan kaddamuu fi Rabbirraa Rahmata isaaniif kadhachutu nurraa eegama.
Rabbiin Subhanahuu wata'aalaa akkana jedha:
وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا
"Isaaniif rahmata godhuuf jecha, koola (kochoo) xiqqeenyaa isaaniif gadi qabi “Gooftaa kiyya! Akkuma isaan anaa xiqqaa ta’ee na guddisan Atis rahmata isaaniif godhi” jedhi."
2.4K viewsMohamedamin Hussen, 05:52
"Ani dubartoota harka hin fuudhu."
[Sahiihul-Jaami' : 2513]
- Zinaafi balaarraa fagaachuuf intala maatii kee irraa hin tahin(siif Halaal hin tahin) harka hin fuudhin.
*إني لا أُصافِحُ النِّساءَ.*
الراوي : أميمة بنت رقيقة.
1.1K viewsNuuralhudaa, 18:07
👍 57👎 6💬